लक्ष्मी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २० मंसिर २०७५)
सन् २००४ अप्रिलमा नेपालको १६औं वाणिज्य बैंकको रूपमा लक्ष्मी बैंक स्थापित भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अवधिमै तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी पुर्‍याउने बैंकमध्ये लक्ष्मी बैंक पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट १० प्रतिशत बोनस र शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको यस कम्पनीले गत वर्षको लाभांश भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । एभरेष्ट बैंकसँग मर्ज हुने हल्ला भए पनि हालसम्म यस विषयमा कम्पनीले आधिकारिक सूचना भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यदि यी दुई कम्पनी मर्ज भए नेपालमा राम्रो कम्पनीको रूपमा स्थापित हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । पूँजी र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशत बढी रू. ३० करोड ३० लाख १७ हजार खुद नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा सञ्चालन नाफा करीब ४१ प्रतिशत प्रतिशत बढेकाले पनि नाफा बढ्नमा सहयोग मिलेको देखिन्छ । गत वर्ष रू. ३३ करोड ५२ लाख ३४ हजार पुगेको कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा यस वर्ष रू. ४७ करोड १४ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।
2018-12-06 - 225 view(s) - abhiyan